4 Maalmood oo Xidhmada Goolafka Fulinta ah @ Thana City Country Club, Thai Country Club & Muang Kaew -
4 Maalmood oo Xidhmada Goolafka Fulinta ah @ Thana City Country Club, Thai Country Club & Muang Kaew
x Waad ku mahadsantahay soo gudbinta baaritaanka. Waanu kula soo xidhiidhi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan kari karno.
Isticmaal foomka hoose si toos ah noola soo xiriir.
Fadlan dhammaystir dhammaan aagagga loo baahan yahay.
Maxaad jeclaan lahayd inaad wax ka weydiiso? *
Naadiga Wadaniga ee Thana, oo ku yaal 25 daqiiqo oo keliya bartamaha Bangkok, waa mid ka mid ah koorsooyinka golf-ka ee Koofurta-bari Aasiya oo uu naqshadeeyay halyeeygii hore ee adduunka Greg Norman
Maalinta 1aad | Bangkok [-]
U wareejinta khaaska ah ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Suvarnabhumi ee Bangkok illaa magaalada hoose ee Bangkok gawaarida qaboojiyaha leh. Waxay ku taalaa 32 kilomitir galbeedka garoonka diyaaradaha, wareejinta waxay qaadan doontaa ugu yaraan 45 daqiiqo si ay u gaarto hudheelkaaga. Habeenkii oo ku yaal Well Hotel Bangkok.
Maalinta 2aad | Bangkok [Quraacda ayaa lagu daray]
Naadiga Thana City Country Club, wuxuu ku yaal meel 25 daqiiqo u jirta bartamaha Bangkok, waa mid ka mid ah koorsooyinka golf-ka ee Koofurta-bari Aasiya oo uu naqshadeeyay kii ugu horreeyay adduunka Greg Norman. Koorsadu waxay ka faa'iideysatay dib-u-habeyn buuxda iyo dib-u-habeyn lagu sameeyay 2018. Waxay ku habboon tahay oo kaliya 25 daqiiqo oo u jirta bartamaha Bangkok, isla markiiba koonfurta garoonka diyaaradaha Suvarnabhumi. Barxadda 7,008, par 72 koorsada waxaa lagu dejiyey hareeraha quruxda badan ee muuqaalka leh waxayna leedahay cagaar dhaqso badan, roogayaal istiraatiiji ah oo la dhigo iyo sidoo kale harooyinka dabiiciga ah iyo durdurrada. Dheecaan aad u fiican ayaa u oggolaanaya ciyaarta sanadka oo dhan. Tas-hiilaadku waa kuwo dhammeystiran oo aan midba midka kale lahayn. Xarumaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah kala duwanaanta darawalnimada heer caalami ah, cagaar dhigista, aag tababar gaaban ah iyo akadeemiyada golf-ka loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah xarumaha tababarka golf-ka ugu fiican Thailand. Adeegyada hab-nololeedku sidoo kale waa kuwa sare, waxaana ku jira aqal raaxo leh oo raaxo leh oo ay ku jiraan raashin iyo dukaamo cabitaan oo aad u fiican si loo daboolo baahi kasta.
Galabtii xilliga firaaqada
Habeenkii oo ku yaal Well Hotel Bangkok.
Maalinta 3aad | Bangkok [Quraacda ayaa lagu daray]
Muang Kaew waa aag golf golf run ah oo ku dhow daaraha dhaadheer ee Bangkok. Koorsada meesha ugu wanaagsan ee koofurta ka xigta garoonka diyaaradaha Suvarnabhumi Airport waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon golf-ka doonaya inay ciyaaraan, laakiin waqtiga ku yar. Waxaa dib u naqshadeeyay Schmidt -Curley, Muang Kaew wuxuu leeyahay xaalado wanaagsan sanadka oo dhan. Koorsadu waxay ku faantaa cagaarka si fiican loo ilaaliyo, qaarna sare u kacsan, oo leh aagag ballaaran oo laga qabsado - qaab naqshad gaar ah oo dhif ah lagu arko koorsooyinka inta badan fidsan ee Bangkok. Makhaayada naadiga waxaa ku yaal cuntooyin aad u fiican, dukaanku wuxuu leeyahay xulasho ballaaran oo dhar ah oo ah qiimaha tartanka. Caddaysyadu waa khibrad waxayna ka dhigi doonaan maalin weyn xitaa ka sii fiican. Muang Kaew sidoo kale sifiican ayaa loo dayactiray waxayna taasi ka dhigeysaa maalin wanaagsan golf-ka kuwa waqti yar ku jira gacmahooda
Maalinta 4aad | Bangkok [Quraacda ayaa lagu daray]
Waxay ku dhowdahay neecawda qaboojinta ee Gacanka Thailand, koonfur-bari ee Bangkok, kooxda raaxada leh ee Thai Country Club waxaa loo sameeyay mid ka mid ah naadiyada golf-ka ugu wanaagsan Aasiya. Waxaa loo furay adduunka golf-ka bishii Diseembar 1996 waxaana loogu talagalay in lagu qeexo qeexitaanka Isboortiga Golf ee Mareykanka Dennis Griffiths, madaxweynihii hore ee Jaamicadda Mareykanka ee Golf Course Architects. Naqshadeynta ayaa la jaanqaadaysa ciyaarta caadiga ah ee maalinlaha ah ilaa loolan aad u adag sidaa darteed ciyaartoydu kor ayey u qaadayaan cayaartooda waxayna ka baxayaan aaggooda raaxada. Koorsada 7,097-yaard ayaa markii ugu horreysay si dhab ah loo tijaabiyay intii lagu jiray 1997 Asian Honda Classic, oo uu ku guuleystay Tiger Woods. Koorsadan quruxda badan ayaa caan ku ah xaaladeeda nadiifka ah iyo godadkeeda kaladuwan, oo ay weheliso waxyaabo badan oo biyo ah, iyo sidoo kale xayawaan aan caadi ahayn iyo dhir.
U wareejinta khaaska ah ee Well Hotel Bangkok una wareejiso garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Suvarnabhumi ee Bangkok iyadoo la raacayo gaari qaboojiye ah. Waxay ku taal meel 32 kiiloomitir bari ka xigta bartamaha magaalada, wareejinta ayaa qaadan doonta ugu yaraan 45 daqiiqo si ay u gaarto hoolka ay ka baxdo duulimaadkaagu.
Waxaa dhaqso laguugu wareejin doonaa gaadhiga. Waad ku mahadsantahay DULQAADKAAGA.
Isticmaal jadwalka hoose si aad u ballansatid dalxiiskan.
Tani waa booqasho maalinle ah.
Kumaa ku soo biiraya?
Fadlan xulo tirada dadka waaweyn iyo carruurta ku biiraya safarka adoo isticmaalaya kontaroolada aad hoosta ku aragto.
Soo koobitaanka safarkaaga ayaa lagu muujiyay hoos.
Muddada dalxiiska (maalmaha)
Wadarta boos celinta
Wadarta alaabada guud
Qaddarka deebaajiga *
Muuji hoos u dhaca qiimaha
Hoos udhaca qiimaha jaale dalxiiska
Waxyaabaha dheeraadka ah ee qiimo dhaca
Dib u celi	Ku soco
Waan ka xunnahay, socdaalkan lama heli karo si loo qabsado xilligan
Xalaal Bangkok Travel Guide
Socdaalka Xalaal ee Thailand
Naadiga Wadaniga ee Thana, oo ku yaal 25 daqiiqo oo keliya bartamaha Bangkok, waa mid ka mid ah koorsooyinka golf-ka ee Koofurta-bari Aasiya oo uu naqshadeeyay kii ugu horreeyay adduunka Greg Norman.
voco Cardiff St. David	   
Havannah Street, CF10 5SD, Cardiff, Boqortooyada Ingiriiska